BRAVO - Zvikwereti zvakachengeteka
BRAVO – Zvikwereti zvakachengeteka
BRAVO ine bhizimisi riripo rekufambisa kwema-macro uye micro-based based based applications, iyo ikozvino inoshumira muAmerica misika huru nemakumi ezviuru zvevashandi vanoshandisa pamwedzi. Inyanzvi yekusarudzwa kwemafambisi ekubhadhara mari BRAVO yakaramba ichikura kuva “chizvarwa chinouya” chekubhadhara chikamu, kusanganisira teknolojia yekuvhara mubhizimisi rayo. Iyi teknolojia ndiyo imwe danho pakuita kubhadhara mari isingazivikanwi, inodhura, munyika yose uye, inonyanya kukosha, kukurumidza nguva yekutengesa, kupa mutengi zvizere kutonga pamusoro pekutengesa.
BRAVO Pay inoenderera mberi kuunza mikana yemari kune chizvarwa chitsva chinokoshesa zviri nyore, zvakavanzika uye kusina pachena nemhinduro yekubhadhara yakagadzirirwa kugamuchira mashoma kwekristpto zvipo!
BRAVO yakasikwa muna 2014 naMaria Luna (MBA) naDkt. Hector Rodriguez, apo vakazviwana vari mumamiriro ezvinhu apo vaifanira kubhadhara mumwe munhu, asi vakanga vasina mari yekuita kudaro.
“Takapfuura neSouth Utah uye tisina mari yekukwanisa kutungamira mutungamiri wedu, saka takaona kuti panofanira kunge kune nzira yekubhadhara mumwe munhu nokuda kwebasa ravo, kunze kwekuda kwekugoverana mashoko ega kana ruzivo-kungobhadhara. saka Bravo akaberekwa, “akadaro Dr. Rodriguez.
Pashure pemwedzi yakawanda yekutsvakurudza nekusimudzira kwakaiswa kumushandisi, sarudzo yakatangwa muTechCrunch Inoparadza muSan Francisco muna 2015, iyo yakagamuchira Mutambo weVateereri.
Chikumbiro chacho chakaiswawo pa ABC muna 2017, apo sangano re BRAVO rakapinda muchibvumirano nevatengesi vaviri vakakwirira.
Basa re BRAVO rinokurumidza kupararira kupfuura Phoenix, iyo kambani iripo, uye ikozvino yasvika maguta anopfuura 1 000 muUnited States nezviuru zvemabhizimisi maduku, kusanganisira mapoka ekupaka, maresitorendi uye madzimai-vatengesi vachishandisa chibvumirano kuti vabvume nyore nyore kubhadhara mari.
Iyo kambani inoshandawo nemasangano anobatsira saFenieni Children’s Hospital, Alice Cooper Solid Rock Foundation, One Vision One World, nevamwe vakawanda kuti zvive nyore kwavari kugamuchira zvipo.
Bravo zvino integrates Michina blokcheyn waro papuratifomu kuderedza kunonoka, izvo zvichaita kuwedzera kutengeserana apo yokuderedza mari kusvika pakuguma user.
Munguva pfupi boka kuchaitawo kutanga kutengesa zviratidzo uye chiratidzo BVO kubudikidza Bravo richashandiswa simba pachikuva, User mari yechikoro uye kubvumira vatengesi kutenga uye kutengesa pamusoro zvakasiyana kriptovalyutnyh exchanges. Zuva rekutengeswa kwechikwereti hachina kuziviswa.
Mune ramangwana, kambani kuchawedzera kupinda kumisika yose, apo Mobile muripo mararamiro ari kukura nokukurumidza, kunyanya munyika dzichiri kusimukira, uye achaenda kure tipping indasitiri pfungwa vezera kubhadhara, Retail kwema, kuti API magadzirirwo uye zvakawanda.
Tsvaga vanozvishandisa pedyo ne GPS uvabhadhare zvakananga vasina kushandisa e-mail, User zita kana nhamba dzorunhare.
Ongorora uye zvinopa inofambiswa vaunofarira nyanzvi, vatengesi, vaimbi, kana ani zvake pashure kuita muripo.
Zviri nyore kuona nhoroondo yekutengeserana uye chengetedza mamiriro ekufambisa pameso.
Bharai mumasekondi muchishandisa email, nhamba yefoni kana Facebook.
Nyore kuwedzera rako rokubhengi kana kadhi Data kutanga kutumira kana kugamuchira mari pakarepo.
My Bitcointalk profile link; https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1545555
Global Microfiber Synthetic Leather Market 2019- by Market Size, Trends and Forecast 2024